-Xidhkii Wire mesh, ahama Steel Wire mesh - DXR
Sifeey Wire mesh
Dutch tidicdo Wire mesh
Black Wire Maro
Naxaas Wire mesh
DXR Wire mesh waa soo saarta & Ganacsi Combo a of silig mesh iyo maro silig ee Shiinaha. Iyada oo record track ah oo muddo 30-sano ah oo ganacsiga iyo shaqaalaha iibka farsamo iyadoo in ka badan 30 sano oo khibrad ah marka la isku daro.
brand DXR sidii qori caanka ah ee Gobolka Hebei ayaa ka diiwaan gashan 7 dal oo dunida ah ee ilaalinta summad. Maalmahan, DXR Wire mesh waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu biraha tartan mesh silig ee Asia.
Ahama Steel Wire mesh ayaa rajo
Wax soo saarka ee warshadaha ahama mesh silig steel waa Shiinaha oo dhan, xataa daboolaya dunida oo dhan. Noocan ah wax soo saarka ee Shiinaha waxaa inta badan laga dhoofiyey in United ay ...
Sida Loo Doorto High Quality ahama Steel Wire mesh-saareyaasha
Waayo, iibsada mesh silig ahama, maalin kasta ka heli doontaa boqolaal kun oo warqado horumarka. In warqado badan oo horumarineed, sida loo doorto saarayaasha oo tayo sare leh waa dhibaato saxariir. First, fool ka fool. Ka saar ganacsatada ah. Waxaad dhawrtaa iibiyaha leeyahay warshad lahayn. Tani waxay ka saari doonaan inta badan ganacsatada ah, laakiin ...
Sida loo Tijaabi Tayada ee laga keeno ahama Steel Wire mesh
No wax qalad, inta badan ka muuqataa content ee nickel, ahama, content nickel, tusaale ahaan 304 waa 8% -10%, laakiin Shiinaha, 304 ahama content nickel bir ah 8%, 9%, ama haddii aad rabto in 10% content nickel mesh bir, waxay u baahan yihiin tilmaamaha gaarka ah. dhexroor Wire Baadi kuma, qaar ka mid ah alaab-qiimaha gaar ah u hooseeya, l a ...
NO.18, wadada Jing Si, Anping Industrial Park, Gobolka Hebei, Shiinaha.
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist our, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan noqon doonaa la xiriiri in 24-ka saac.
Plain-xidhkii Wire mesh , Galvanized Wire mesh, ahama Steel mesh Maro , Stainless Steel Hardware Cloth, Plain Steel Wire Maro , Wire mesh ahama Steel ,